Bhala For Date My Pet
Join our team of great abanikeli.
Thina ukwamukela njalo izihloko ezinkulu abalobi, Blogger and ezizimele abalobi. Ukuze uthole umqondo walokho sifunani, sicela ufunde ezinye izihloko on the site. Lokhu kuyokusiza nokuba ube umqondo tone yethu kanye nohlobo izihloko wasebenza kahle izilaleli zethu.
Abanye ulwazi jikelele:
Isinqumo lethu esihlokweni ncwadi kusekelwe zifanelwe kanye ukufaneleka sihloko ngayinye.
Uma sivumelana ukushicilela isihloko sakho sokuqala, ke incwadi yesivumelwano izonikwa ngaphambi inkokhelo yenziwa at rate wethu wamanje for sihloko ngasinye. Lokhu ngeke kube isivumelwano izethulo ezalandela izoshicilelwa. Zonke izethulo okwalandela ncwadi kuyobe kusekelwe zifanelwe kanye ukufaneleka sihloko ngayinye.
Inhloso yethu izilaleli kukhona US phezu 18 abadala abangashadile.
Ngaphandle minor, izihloko kufanele phakathi 600-1000 Amazwi.
Iziqu okuqukethwe baye basebenza kahle tiphawulo eqinile, izinombolo (isib tinhla) kanye nemibuzo.
Zonke izethulo sihloko KUMELWE kube original futhi ungalokothi eshicilelwe ngaphambi.
Abalobi bangakhetha ukuba ghost ababhali noma ube profile abo ishicilelwe kwi site.
Ukuze balethe isihloko for ukucabangela, sicela imeyli lesi sihloko:
ukuzithoba AT datemypet.com
NOTE: Iziphakamiso kusuka agency noma ibhizinisi commercial izocatshangelwa on a non ikhokhwe isisekelo
Izindlela Thola Uthando Ukuphila Kwakho Little Akwaziwa
Katz on Dogs : A Commonsense Guide to Living with Training and Dogs
Yini Ingabe Abesifazane Want in a Relationship?